गण्डकी प्रदेशमा थप ५३ मा कोरोना संक्रमण- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
असार १५, २०७७ प्रतीक्षा काफ्ले
गण्डकी — गण्डकी प्रदेशमा सोमबार ५३ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ । योसँगै गण्डकीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ सय ४९ पुगेको छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको प्रेस विज्ञप्तीका अनुसार स्याङ्जामा १०, तनहुँमा १०, बाग्लुङमा १४, पर्वतमा १३ र गोरखामा ६ जनालाई संक्रमण देखिएको हो ।
प्रदेश क्षयरोग केन्द्र पोखरा र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उनीहरुको स्वाब परीक्षण गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए । संक्रमित सबै व्यक्तिहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाको आइसोलेसनमा लैजाने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
सोमबारै नवलपुरमा कोरोनामुक्त भएर १६ जना घर फर्किएका छन् । हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा २१४ जना संक्रमित निको भइसकेका छन् भने २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
हिले बजारमा सडककै हिलोमा रोपाइँ !
असार १५, २०७७ रमेशचन्द्र अधिकारी
धनकुटा — रोपाइँको भाकासहित बाजागाजा घन्किरहेको थियो । रोपाहार धान रोप्न व्यस्त देखिन्थे । हातमा राष्ट्रिय झन्डासहित भेला भएर हातमा बिउ बोकेकाहरु धान रोप्दै थिए । तर, खेतका गरामा होइन, हिलाम्य सडकमा ।
यो धनकुटाको पर्यटकीय स्थल हिले बजारमा सोमबार देखिएको दृश्य हो । देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा हिलेवासीले भने पिच सडकमाथि थुप्रिएको दलदलमा धान रोपे । उनीहरुले ढल व्यवस्थापन र सडकमा थुप्रिएको हिलो नपन्छाइएको प्रति सांकेतिक विरोध जनाउन सडकमै रोपाई गरेको बताएका छन् । पछिल्ला केही वर्षमा यसरी विरोध जनाउने क्रम अन्य जिल्लामा पनि देखिएका छन् ।
प्रकाशित : असार १५, २०७७ २०:३०